Ungayisebenzisa kanjani ifoni yakho njengekhamera yewebhu | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | I-Telephony, Ama-camcorder
Ngenkathi amakhamera ama-smartphones athuthuke kakhulu eminyakeni yamuva, esimweni sama-laptops, kubonakala sengathi abenzi bawo abawenzi lo msebenzi. Iningi, uma kungezona zonke izincwadi zokubhalela, lisinikeza ukulungiswa nekhwalithi kufana nalokho ebesingakuthola kumaselula kusuka ngo-2010.
Uma wenza izingcingo zevidiyo njalo, ikakhulukazi uma zihlobene nomsebenzi, enye indlela yokwenza ngcono ikhwalithi ukuthenga i-webcam (i-Logitech ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili kulesi sigaba). Kepha uma ungafuni ukusebenzisa imali, esinye isixazululo siyenzeka sebenzisa ikhamera yefoni yakho njengekhamera yewebhu.
Kokubili ku-Google Play Isitolo naku-Apple App Store, singathola inombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza lokho baqinisekisa ukuthi singasebenzisa i-smartphone yethu njengekhamera yewebhu, kulabo abangasivumeli ukuba sikhethe ukulungiswa kwevidiyo okuvumelana kangcono nezidingo zethu kulabo abadinga ukubhaliswa kwanyanga zonke okuzosetshenziswa. Ngemuva kokuzama cishe zonke izinhlelo zokusebenza ezitholakalayo, sinezinketho ezimbili kuphela ezitholakalayo zeWindows nenye ye-macOS.
1 Yiziphi izicelo esizidingayo?
2 Sebenzisa ifoni yakho njengekhamera yewebhu ku-Windows
2.1.1 Nge-smartphone ye-Android
2.1.2 Ngokuthinta i-iPhone, i-iPad noma i-iPod
2.2.1 Nge-smartphone ye-Android
2.2.2 Ngokuthinta i-iPhone, i-iPad noma i-iPod
3 Sebenzisa ifoni yakho njengekhamera yewebhu ku-macOS
3.1.1 Nge-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch noma i-smartphone ye-Android
3.2.1 Nge-smartphone ye-Android
3.2.2 Ngokuthinta i-iPhone, i-iPad noma i-iPod
5 Ngaphezu kwekhamera, singasebenzisa futhi umbhobho
Yiziphi izicelo esizidingayo?
Ukuze usebenzise i-smartphone yethu, kungaba yi-iPhone noma i-smartphone ephethwe yi-Android, kokubili kwi-PC naku-Mac, sinezicelo ezimbili kuphela esinazo: iDroidCam ne-Epocam. Kuzo zombili izitolo singathola ezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo, kepha ngaphandle kokuthi zinikezwa njengekhamera yewebhu, abasiniki umsebenzi esiwufunayo.
Ukusebenza kwazo zombili izinhlelo zokusebenza kuyefana: ngokusebenzisa abashayeli kanye / noma uhlelo lokusebenza esilifaka kwikhompyutha yethu, bayakwenza kholwa kwikhompyutha esixhume nayo i-webcam nemishini yethu, ngale ndlela, lapho sisungula umthombo wevidiyo, singakhetha eyomdabu (leyo efaka idivayisi yethu uma iyilaptop) kanye ne-smartphone yethu, okuya ngokuthi isicelo esisisebenzisayo, bazobizwa I-DroidCam o I-Epocam.
Ngenkathi iDroidCam isivumela ukusebenzisa i-smartphone yethu kwiWindows nganoma yiluphi uhlelo lokusebenza noma insiza yewebhu, i-Epocam isinikeza uchungechunge lwemikhawulo ngaphakathi kwe-macOS, kusukela nge-macOS 10.14 Mojave, izinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe ze-Apple sebenzisa isikhathi sokusebenza esiqinile (ukugwema izinhlobo ezithile zokuxhashazwa, njengokujova ikhodi, ukudunwa kwemitapo yolwazi exhunywe ngamandla (i-DLL), nokukhohlisa isikhala senkumbulo yenqubo).
Izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa isikhathi sokusebenza esinamandla kakhulu azikwazi ukulayisha ama-plugins wesithathu ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngokusobala ngunjiniyela wohlelo lokusebenza, yingakho abashayeli bekhamera abavela eceleni Azisebenzi nezinhlelo zokusebenza ze-Apple kepha nezinye izinhlelo zokusebenza ukwenza amakholi wevidiyo.
IDroidCam isinikeza izinguqulo ezimbili ezihlukene ze-Android, eyodwa mahhala neyodwa ikhokhelwe. Okhokhelwe akugcini ngokususa izikhangiso kepha futhi uyasivumela shintsha ukuma kwesithombe, imodi yesibuko, uvule i-smartphone flash ukwenza ngcono ukukhanyisa, kusondeza isithombe ... I-DroiCamX, njengoba ibizwa ngokuthi inguqulo ekhokhelwayo, ibiza ama-euro angu-4,89 ku-Google Play Isitolo.
UKinomi, unjiniyela we-Epocam, usinikeza izinhlobo ezimbili zohlelo lokusebenza: eyodwa mahhala neyodwa ikhokhwe. Le nguqulo yamahhala, ngaphezu kokuhlanganisa izikhangiso, ayisivumeli ukuthi siguqule isinqumo esifuna ukusisebenzisa ngesikhathi sokudluliswa kwevidiyo, umsebenzi otholakala kuhlobo lwePro, inguqulo ebiza ama-euro angu-8,99 ku-App Gcina no-5,99 ku-Google Play Isitolo.
Sebenzisa ifoni yakho njengekhamera yewebhu ku-Windows
Into yokuqala okufanele siyenze faka uhlelo lokusebenza lwe-DroidCam kudivayisi yethu ye-Android ngesixhumanisi engisishiya ngezansi.
I-DroidCam - I-Webcam ye-PC
I-DroidCamX - i-HD Webcam ye-PC
Uma sesiyifakile, sidinga ukulanda abashayeli balolu hlelo lokusebenza enguqulweni yethu ye-Windows, abashayeli esingalanda kubo leli khasi lewebhu. Uma phakathi nenqubo yokufaka, kuya ngohlobo lwe-Windows esilusebenzisayo, kuvela umyalezo othi "Uyafuna yini ukufaka le software", chofoza ukufaka, ngoba abashayeli bakho kokubili ividiyo nomsindo kuyadingeka ukuze uhlelo lokusebenza lusebenze kahle.
Okulandelayo, sivula uhlelo esilulande ku-Android futhi luzokhombisa ikheli le-IP kanye nechweba lokufinyelela (iDroiCam Port), elibhekele lokho kufanele singene kuhlelo lokusebenza ledeskithophu. Kuhlelo lokusebenza leselula akudingeki senze noma yini enye. Manje kufanele sivule uhlelo lweWindows.
Ewindini lesicelo se-DroidCam, kufanele faka idatha ye-IP yedivayisi ne-DroidCam Port ezikhonjiswa esikrinini se-smartphone yethu. Kulokhu kungaba: 192.168.100.7 kwe-IP no-4747 kweDroidCam Port. Ekugcineni sichofoza ku-Start futhi sizobona ukuthi iwindi elisha livuleka kanjani ngomfanekiso wethu. Isinyathelo esilandelayo ukuvula uhlelo lokusebenza esifuna ukusebenzisa ngalo ikhamera ye-smartphone yethu.
Esigabeni sekhamera, kufanele khetha njengomthombo wokufaka we-DroidCam Source X (inombolo ekhonjisiwe ayithinti inqubo).
Ngokuthinta i-iPhone, i-iPad noma i-iPod
Uhlelo oludingekayo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-DroidCam njengekhamera yewebhu, itholakala kuphela ku-Google Play Isitolo (Android application store), ngakho-ke asikwazi ukusebenzisa i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu njengekhamera yewebhu enalolu hlelo lokusebenza.
Silanda uhlelo lwe-Epocam kudivayisi yethu iselula. Nazi izixhumanisi zezinguqulo ezimbili ezitholakalayo.
I-EpocCam: Ikhamera yewebhu ye-Mac ne-PC
Umthuthukisi: ICorsair Memory, Inc.
I-EpocCam Pro: I-HD Webcam ye-Mac ne-PC
Esinyathelweni esilandelayo, kufanele landa abashayeli kusuka lapha (o ukuvakashela ikhasi lonjiniyela) ukuze iWindows ibone ikhamera yethu lapho sivula uhlelo lokusebenza ku-smartphone yethu. Okulandelayo, kufanele sivule uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu kanye nesicelo esifuna ukusisebenzisa ukwenza ikholi yevidiyo futhi khetha njengomthombo wevidiyo i-Epocam. Akudingekile ukumisa ikheli le-IP ledivayisi yethu.
Okokuqala kufanele landa uhlelo lwe-Epocam kudivayisi yethu yeselula. Nazi izixhumanisi zezinguqulo ezimbili ezitholakalayo.
Esinyathelweni esilandelayo, kufanele landa abashayeli kusuka lapha (o ukuvakashela ikhasi lonjiniyela) ukuze iWindows bona ikhamera yethu lapho sivula uhlelo lokusebenza ku-smartphone yethu. Ukuze sisebenzise ikhamera ye-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kufanele sivule uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu nakuhlelo esifuna ukulusebenzisa ukwenza ikholi yevidiyo bese sikhetha i-Epocam njengomthombo wevidiyo. Akudingekile ukumisa ikheli le-IP ledivayisi yethu.
Sebenzisa ifoni yakho njengekhamera yewebhu ku-macOS
Kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-App Store, okuwukuphela kohlelo lokusebenza olusebenza ngempela njengokukhangisiwe yi-Epocam, ngakho-ke kulolu hlelo lokusebenza sinenketho eyodwa kuphela.
Nge-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch noma i-smartphone ye-Android
I-DroidCam kuphela itholakalela iWindows neLinux Okwamanje, unjiniyela akahleleli ukwethula uhlelo lwe-macOS, ngakho-ke ukuphela kwento esinayo kwi-Mac yokusebenzisa i-smartphone yethu njengekhamera yewebhu yileyo enikelwa yi-Epocam.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu landa uhlelo lwe-Epocam kudivayisi yethu yeselula. Nazi izixhumanisi zezinguqulo ezimbili ezitholakalayo.
Okulandelayo, kufanele landa abashayeli kusuka lapha (o ukuvakashela ikhasi lonjiniyela) aqaphele ikhamera yethu lapho sivula uhlelo lokusebenza ku-smartphone yethu. Ukuze sikwazi ukusebenzisa i-smartphone yethu ye-iOS kwi-Mac yethu, kufanele sivule uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu bese sivula uhlelo lokusebenza esifuna ukulusebenzisa ukwenza ikholi yevidiyo futhi khetha umthombo wevidiyo we-Epocam.
Asidingi ukuxhuma amadivayisi ethu ethekwini le-USB lemishini yethu, ngoba ukudluliswa kwezithombe kwenziwa nge-Wi-Fi. Uhlobo olukhokhelwe lwe-iPhone lusinikeza ithuba lokwenza i ukudluliswa kwekhamera ye-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu ngekhebula (ngaphandle kokuphazamiseka).
Uma sifuna ukuhlola ukusebenza ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokushaya ividiyo, singakwazi landa uhlelo lokusebenza lwe-Epocam Viewer lwe-Mac, uhlelo lokusebenza olutholakala ku-Mac App Store ngesixhumanisi esilandelayo. Singasebenzisa futhi lolu hlelo lokusebenza, ngokuhlangana ne-smartphone yethu, njengekhamera yezokuphepha, yize kungesona isixazululo esihle kakhulu salezi zinhloso.
Into yokuqala okufanele siyenze landa uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu ngu-Epocam. Nazi izixhumanisi kuzo zombili izinhlobo.
Okulandelayo, kufanele landa abashayeli kusuka lapha (o ukuvakashela ikhasi lonjiniyela) ukuze i-macOS ibone ikhamera yethu lapho sivula uhlelo lokusebenza ku-smartphone yethu. Ukuze sikwazi ukusebenzisa i-iOS smartphone yethu kwi-Mac yethu, kufanele sivule uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu bese sivula uhlelo lokusebenza esifuna ukulusebenzisa ukwenza ikholi yevidiyo futhi khetha umthombo wevidiyo we-Epocam.
I-Epocam Pro isivumela ukuthi sixhume i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwikhompyutha ukuze ukudlulisa kusheshe futhi kungathinteki ukuphazanyiswa. Uhlobo lwamahhala lusivumela kuphela sakaza ividiyo nge-Wi-Fi, ngakho-ke akudingekile ukuxhuma ngokomzimba idivayisi kwikhompyutha.
Uma imishini indala kakhulu, isithombe ungabonakali kahle njengoba sifuna. Izivivinyo zenziwe kukhompyutha ene-Intel Core i5 ene-16 GB ye-RAM ne-Intel Core 2 duo ene-4 GB ye-RAM. Kuzo zombili izimo, umphumela ube owenelisayo.
Ngaphezu kwejubane lekhompyutha yethu, kufanele futhi sicabangele iprosesa le-smartphone yethu. Endabeni yami, ngisebenzise isizukulwane sokuqala i-Google Pixel (ephethwe yi-Snapdragon 820, iprosesa eneminyaka engama-4 ubudala, ne-4 GB ye-RAM) kanye ne-iPhone 6s (enenye iminyaka emi-4 emakethe).
Esinye isici okufanele sisicabangele uhlobo lwenethiwekhi i-smartphone yethu exhunywe kuyo. Uma sinerutha ehambisana namanethiwekhi ama-5 GHz, kungakuhle ukuxhuma i-smartphone yethu kule nethiwekhi ukuze jabulela isivinini sokudluliswa kwedatha esheshayo, uma sibona ukuthi isithombe siyabanda noma sihamba kancane kwesinye isikhathi.
Kokubili inguqulo ekhokhelwayo ye-DroidCam ne-Epocam isinikeza izinketho zokwenza ngokwezifiso azitholakali kunguqulo yamahhala njengokukwazi ukuguqula ukulungiswa kwekhamera, ukushintshanisa isithombe, ukwenza kusebenze ukugxila okuqhubekayo, vula i-flash yedivayisi ukwenza ngcono ukukhanyisa ... izinketho ezibiza imali encane abazibizayo.
Ngaphezu kwekhamera, singasebenzisa futhi umbhobho
Zombili izicelo ziyasivumela sebenzisa imakrofoni ye-smartphone yethu sengathi ngeye-PC yethu kuzoba njalo. Lo msebenzi muhle uma sifuna ukusebenzisa ikhompyutha yedeskithophu engayifaki ngokwendabuko, yize itholakala kuphela kwiWindows, ngakho-ke uma ungumsebenzisi we-MacOS, kuzofanele usebenzise amahedfoni anombhobho ofakwe kwi-smartphone yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Ungayisebenzisa kanjani ifoni yakho njengekhamera yewebhu
Umhlahlandlela Wasekhaya Oxhumekile: Ukukhetha Ukukhanya Kwakho Okuhlakaniphile